Zim Parly Discuss Bank Rates
Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ese dzinoti hadzisi kufara nenyaya yekuti kubvira zvakatanga kushandiswa mari yema Bond Notes gore rapfuura, vezvitoro vave kuchaja mitengo yakasiyana uye vanotenga nemari iyi kana kushandisa makadhi ndivo vari kubhadhariswa mari yakawanda.
Nhengo idzi dzinotiwo kunyange hazvo hurumende neReserve Bank of Zimbabwe vakati maBond Notes akafanana nemadhora ekuAmerica, izvi handizvo zviri kuitika.
VaFanni Munengami VeMDC-T vachimirira Glen View North vatsigirana naVaChinotimba vachiti hurumende yakangonyarara vanhu vachirasikirwa nemari.
Asi VaChinamasa vati vese vasina kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhangi vanofanira kuenda nehumbowo hwavo kubhanga guru renyika.
Asi nhengo dzeparamende dzatiwo mukuru webhanga iri, VaJohn Mangudya, havasi kubatika kuti vatsanangure kuti sei vemabhizimisi nemabhanga vasiri kutevedzera zvavakataura.
Muzvare Irene Zindi veZanu PF vachimirira Mutasa South vaudza VaChinamasa kuti VaMangudya vanofanira kuonekwa kuti vatsanangure nyaya dzavo dzemashandiro emaBond Notes.
VaChinamasa vati VaMangudya munhu anoonekwa uye vachaita kuti vese vanoda kuvaona vakwanise kuvaona.
Vatiwo bhiri riri kuvandudza mutemo wemashandiro ebhanga renyika, iro rave kuzeiwa neparamende, richaranga vese vemabhizimisi nemabhanga ari kuomesera vanhu.
Zvichakadai, mumiriri weHarare West, VaTerence Mukupe, vakumbira hurumende kuti irange vakomana vetimu yebhora yemaWarriors nekuvavharira muchitokokis chemasoja mushure mekunge vaburitswa mumakwikwi eAfrican Cup of Nations awo ari kuitwa kuGabon.
Asi gurukota rezvemitambo, VaMakhosini Hlongwani, vati izvi hazvisi kuzoitika uyewo vakumbira ruregerero kunyika yese nekutadza kwakaita maWarriors vakati vave kutogadzirira makwikwi eAfcon anotevera.
Asi vamwewo vakaita saVaInnocent Gonese vati hurumende yakaratidza rusarura nekupa maWarriors mari yakawanda chose apo vakaenda kuAfcon asi ikanyima kana kupa timu yema Mighty Warriors, iyo yakapihwa mari shoma apo yakaenda kuAfcon yemadzimai pamwe nekuenda kuRio Olympics.